မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: အီဒွလ် ဖိသိရ် (သို့) ဥပုသ်လထွက် ၀ါကျွတ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်-- မိန့်ခွန်း
အစ္စလာမ့်ရောင်ခြည် ဘလော့ဂ်မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
အီဒွလ် ဖိသိရ် (သို့) ဥပုသ်လထွက် ၀ါကျွတ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်-- မိန့်ခွန်း
မြန်မာမွတ်ဆလင်အပေါင်းနှင့် တစ်ဘက်သတ် နှိပ်ကွပ်ခံနေရသူများ၊ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်နေသူများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့သပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များဟာ တစ်နှစ်မှာ အီးဒ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါ နှစ်စဉ် ကျင်းပ ဆင်နွှဲ နေ ပါတယ်။ ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် အီးဒ် ဆိုတဲ့ အာရ်ဗီဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ၀မ်းမြောက်အဲ လဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ အ
ထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်ကို အီးဒ် လို့ သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာရဗ် ခရစ်ယာန်များက ခရစ်မတ် ပွဲ တော်ကို အီးဒုလ် မီးလာ့ဒ် လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
အာရ်ဗီဝေါဟာရနဲ့ ပတ်သက်ရင်းနှီးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်ဆလင်တွေကလည်း ဥပုသ်လကုန် ၀ါကျွတ်ပွဲတော်ကို အီးဒုလ် ဖီးေဿလ် လို့ ခေါ် ကျင်းပပြီး၊ ကံဆောင်ပရိဝါ့သ် ပြုတာ ဟာ့ဂ်ျ အခမ်းအနားကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ပွဲတော်ကိုတော့ အီးဒ်ဒုလ် အဿွဟာရ် လို့ ခေါ်ဆို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ မွတ်ဆလင်များ အတွက် အီးဒုလ်ဖီးေဿလ် ပွဲတော် ကျင်းပနေတဲ့ နေ့ပါ။ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အမှန်တစ်ကယ် ၀မ်းသာအဲလဲနဲ့ ကြည်းနူးမှုတွေ ရင်ထဲမှာ တစ်ကယ်ပဲ ရှိ နေပါသလား။ သို့မဟုတ် ရင်ထဲမှာ ပြည့်တင်း မွန်းကျပ်မှုတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အီးဒ် (ပွဲတော်) ကို ပြုလုပ်နေကြ ပါ သလား။----
ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်ဆလင် အားလုံးရဲ့ အဖြစ်က သူ့အတွက် လာ့ဘ် လာဘ ငွေစ၊ ကြေးစလေး ရမလား ဆိုတာကို ရင်ထားမှာ ထားပြီး မျက်နှာက အပြုံးတုနဲ့ လူတိုင်းကို ဆက်ဆံ နေရတဲ့ တည်းခိုခန်း က ဧည့်ကြိုတစ်ဦးရဲ့ အပြုံးမျိုးနဲ့ သာယာနေရတဲ့ အဖြစ်ထက် မပိုနိုင်ပါ။ ဘယ်နေ့မှာ ငါတို့ အတွက် ဘေးဒုက္ခများ လာလေ မလဲလို့ ရင်ထဲမှာ အပူမီးတွေ ကိန်းနေရဆဲပါ။
ဒီအပူမီးတွေကို ကုစားဘို့ လူအများစုကြီးက လောကီငွေကြေး အမြောက်အများကို အလုအယက် ရှာဖွေနေကြတယ်။ ဖြစ် ပေါ်လာတဲ့ ဘေးဘယာများကို ဒီငွေကြေးနဲ့ ဖုံးလိုက်မယ် ဆိုတဲ သဘောမျိုးလည်း တစ်ချို့မှာ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်အတွေ့ အကြုံနဲ့ကိုယ်- ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာကြောင့် လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂလ ခံစား များကို မှားသည် မှန်သည် မဝေဖန်လိုပါ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကိုတော့ စနစ်တကျ ပြန်လည်သုံးသပ်စေဘို့ သတိ ဖေါ်ပေးလိုပါတယ်။
ဒီနေ့ မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ မတော်မတရား တစ်ဘက်သတ် နှိပ်ကွပ်ခံနေရတာကို မွတ်ဆလင်တိုင်း သာမက အမှန် တစ်ကယ် လူ့အခွင့်အရေးမှာ တန်ဘိုးထားတဲ့ လူတိုင်း သိနေမြင်နေပါတယ်။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ သော့ချက်ကို အရင် မရှင်းဘဲ လက်ပူတိုက် ဖုံးဖိ ရှင်းနေယုံနဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ဟာ အဆင်ပြေသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ မိမိ နဲ့ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းသာယာသွားမှ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အေးချမ်းသာယာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဥပမာ မိမိ အိမ်တစ်လုံးထဲပဲ-- မီးဘေး အာမခံ ၀ယ်ထားပေမယ့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်တွေဟာ အလွယ် တစ်ကူ လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ လောင်စာတွေ ဖြစ် နေရင်--၊ အချိန်မရွေး မီးထလောင်နိုင်တယ်၊ အချိန်မရွေး အိုးအိမ် ဥစ္စာများ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ မိမိရဲ့ မီးအာမခံ လျှော်ကြေးက ဘေးဒုက္ခရောက်ပြီးမှာ ပြန်ရကောင်း ရလာမှာ ဖြစ်တယ်၊ ဒါတောင် မသေချာလှပါ။ အလားတူပဲ-- မြန်မာ မွတ်ဆလင် တွေဟာ မိမိရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူဘို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ ရခိုင်မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ ဗမာပြည်ဘက် အခြမ်း ကို မကူးစက်လာရင် ပြီးရော စိတ်မျိုး၊ ကချင်မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ ကရင်ဘက်ကို မကူးစက်လာရင် ပြီးရော စိတ်မျိုး- ဘယ် သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးကို လုံးဝ မထားသင့်ပါ။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အနစ်နာခံရပါမယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရပါမယ်။ ငါသေမှာ ကြောက်လို့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ယုတ်မာနေသူများကို အလိုက်သင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဟာ အနစ်နာခံနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူမှ အလကား မသေချင် ပေမယ့်- မတရားမှုများ ပပျောက်သွားအောင် ပြောသင့်တာများကို ပြောရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ယုတ်မာသူများဟာ ညီညွတ် လာတဲ့ အင်အားတစ်ခုကို အချိန်မရွေး ဖြိုခွဲ အားနည်းသွားအောင် လုပ်ပစ် ဘို့ ကြံစည်နေတယ် ဆိုတာကိုလည်း အမြဲ တွက်ထားရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အချင်းချင်း သွေးမကွဲဘို့၊ ငွေကြေး ဥစ္စာနဲ့ ဆွဲမြှူခြင်းအပေါ် မသာယာမိဘို့- ရာထူးဌာနန္တရ ကို မမက်မိဘို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ရာထူးမက် မယ်၊ ငွေကြေးမက်မယ်- အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ထားမယ် ဆိုရင် တော့--၊ အဲ့ဒီ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ဘယ် တော့ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုကို ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါ။
နောက်လိုက်များ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ကျိုးကြည့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များကို နေရာမပေးသင့်တော့ပါ။ အချင်းချင်း ကာဒယာနီ ပရ်ဝေဇီ ၀ါဟာဘီ ဆွန်နီ၊ ရှီယာ ထိုးချ စွတ်စွဲနေပြီး တစ်ကယ့် သတ္တိကောင်း ခေါင်းခံရဲတဲ့ ခေါင်းဆောင်များကို ပုတ်ခတ် ပါယ်သတ်နေခြင်းများကိုလည်း အထူးဆင်ခြင်ရတော့မယ့် ကာလကို ရောက်နေပါတယ်။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ အသိုင်း အ၀ိုင်းတစ်ခုကို တစ်ကယ့် စေတနာကောင်းနဲ့ သတ္တိကောင်းနဲ့ အမှန်တရားအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် လူသားကိုသာ ဦးစီးဦးဆောင်တင်မြှောက်သင့်ပါတယ်။
ငါ နာတုံးခဏ အမေလေးတ၊ ပြီးရင် နဂိုဇတ်ကို ဆက်က နေတဲ့ အလေ့အကျင့်မျိုးက ပညာမဲ့တို့ရဲ့ အလေ့ အကျင့်များ စိတ် စရိုက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်စရိုက် ပိုင်ရှင်များဟာ အီမန်ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ အလွန်အားနည်း နေပါသေးတယ်။ မိမိကိုယ် မိမိ ပြန်လည် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အယူသည်းခြင်းဟာ အီမန်မြင့်ခြင်း အီမန်ကြီးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အနစ်နာခံခြင်း၊ စွန့် လွှတ်ခြင်း၊ စွန့်စားခြင်း လူထုအတွက် သောကထားခြင်း၊ မိမိထက်ပိုပြီး မိမိရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဦးစားပေးခြင်း မိမိရဲ့ အ သိုင်းအ၀ိုင်း အနာဂါတ်ကို တွက်ချက်ပြီး အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်း စားမယ်ဆိုရင် မိမိဘက်က ဘာမဆို လုပ်ရဲ ပေးဆပ်ရဲခြင်း သည်သာ အီမန်ကြီးခြင်း အီမန်မြင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့-- မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိသမျှသော မွတ်ဆလင်များရဲ့လက်တွေ့ ခံစားချက်များ နစ်နာချက်များကို ကုစား ပေးနိုင်ရပါမယ်။ အလားတူ အခြားသော သူများရဲ့ နစ်နာမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု အားလုံးကိုလည်း တတ်အားသမျှ ကာကွယ် ကုစား ပေးရပါမယ်။ မတရားမှု အားလုံးကို ရပ်တန့်သွားအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီအတွက် အသင်းအဖွဲ့တိုင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်း မှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ ငါ့အသင်း ကောင်းစားဘို့ ငါ့ဂိုဏ်း ကောင်းစား ဘို့၊ ငါ့အမျိုးအနွယ် ကောင်းစားဘို့ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး သာ ထားနေရင်တော့-- ဒီလို ခေါင်းဆောင်မျိုးကို အဲ့ဒီ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖယ်ရှားပစ်ရမှာပါ။ ဒီအတွက် လူထုမှာလည်း အသိရှိနေဘို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူ လှည့် တိုင်း လည်နေတဲ့ လူတန်းစားမျှသာ ဖြစ်နေသေးရင်တော့-----။ နောင် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအထိ အဲ့ဒီ လည်ပတ်ခြင်း ရဟတ်ထဲမှာသာ မွေ့နေရမှာပါ။-- စစ်မှန်တဲ့ အီးဒ် (ပျော်ရွင်မှု ပွဲတော်) ဆို တာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ် လာတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များ အနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အီးဒ် ရဲ့ ရသကို ခံစားနိုင်အောင် အမှန်တစ်ကယ် ကြိုးစား ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အလားတူ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ အနေနဲ့လည်း မိမိရဲ့ ရင်ထဲမှာ အစွဲကင်းပြီး တစ် ကယ့် လူသားတွေ အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ကို ဘ၀င်ကျကျ စိတ်ချမ်းသာသာ ဆင်နွဲနိုင်အောင် ကျင်းပနိုင်တဲ့ နေ့ရက်များပေါ်လာပါစေလို့ မေတ္တာပို့သပါတယ်။
B.A၊ မြန်မာစာ (ရန်ကုန်)။ A A (Media Marketing, Utica NY, USA)
Special thanks to Brother Ko Thuriya
Posted by Ordinary person at 10:59 PM
2012 IYS ပြက္ခဒိန်
Double click to see clearly
Get Myanmar font here
ခေတ်ရေစီးကြောင်းလမ်းပေါ်က . လူငယ် .... အွန်လိုင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှား . လုံ့ လ ၀ီ ရိ ယ ကချက်တင်မှာ . တစ်ဂျောက်ဂျောက် . ချက်ကြ ကျူကြတာ . လွယ်လွယ်ချစ် လွယ်လွယ်ပြစ် . ချို၊ ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်၊ ခါး ဇတ်လမ်းတွေနဲ့ . အထွေထွေဗဟုသုတကိုစိတ်မပါ . လေးနက်မှုကရှာရခက် . အလိမ်ခံရမှန်းမသိခဲ့တော့ . နောင်တတွေ ဆိုက်ရောက်ချိန် . -ငါ- . နောက်ကျခဲ့ရပြီတဲ့။
သိချင်တာရှိရင်ဒီမှာမေးပါ - Ask Iman
မွတ်စ်လင်မ်နာမည် & အဓိပ္ပာယ်
العر بىة အလ်အာရဗီ
English to Malay to English
Read Quran each day
ကျောက်ဆိုင်နှလုံးသားများ လောကအလှတရားနှင့် နူးညံ့စေ...
အီဒွလ် ဖိသိရ် (သို့) ဥပုသ်လထွက် ၀ါကျွတ်ပွဲ အထိမ်းအ...
To read in Ramadan
Burmese Muslims network
Global Myanmar Muslim U.
Myanmar Muslim Club
Myanmar Muslim Info Center
Myanmar Muslim Library
Sopheya-In the name of Allah
မွတ်စ်လင်မ် ဘလော့ဂ်များ - comming soon
Islamic general links
Muslim children's world
Online Muslim Women magazine
Online Islamic Magazine
Muslim daily news
14. ၇ိုဇီ၇ိက္ခာတွင် ဗ၇်ကသ်မင်္ဂလာတိုးပွားနိုင်သည့်အေ ကြာင်း၇င်းများ
12. ရင်တွင်းဖြစ် '' အချစ် '' - Love in Islam
11.မာယာကိုဖယ် အမှောင်ကိုဖျောက် အလင်းရောက်ဖို့-
10. Untold story - Muslims Save Jews in world war II
9. ဆွစ်ဇာလန်မှ မီနာရသ် ပိတ်ပင်ရေး နှိုးဆော်ခဲ့သူနိုင်ငံရေးသမား အစ္စလာမ်ဘာသာ ကူးပြောင်း
7.မိုဟာမ္မတ်(ဆွ) အားထိမ်းမြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ဘာသာခြားများ ရှုတ်ချ မှုများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း
6. The Well of Zamzam
75 days in Bangkok (3)
About Racist (2)
Aphwint sar (1)
Buddhist Terrorist (10)
Islamic movie (1)
Real story (4)
zill hajj (1)
ကုရ်အာန်သည် အဖော်မွန် (1)
အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ (1)